🌟 🌟 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐥𝐚𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐬 𝐨𝐟 𝐂𝐅𝐀 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞 🌟 🌟
မိမိ Career ကိုတိုးတက်လိုသူများအတွက် CFA Institute ရဲ့ Scholarship Programs များ
၁. 𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗹𝗮𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 (Exam registration reduced to US $250)
Scholarship တွေထဲမှာမှ အသက်သာဆုံးပေးသွင်းရမယ့် access scholarship ပါ။ CFA charteredholder ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ မည်သူမဆိုလျှောက်ထားနိုင်တဲ့အတွက် full program fees အတွက် အခက်အခဲရှိသူတွေအတွက် အခွင့်အရေးတစ်ခုပါ။ ၂၀၂၀ အတွက် women’s scholarships တွေကတော့ ရွေးချယ်ပြီးပြီမို့ ၂၀၂၁ အတွက်လျှောက်လိုသူတွေတော့ ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ mid-May မှ 15 September 2020 အထိ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
၂. 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻’𝘀 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗹𝗮𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 (Exam registration reduced to US $350)
ဒီ scholarship ကတော့ သူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်း investment field ထဲမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ အခြားသော scholarship များမရလိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးပေးထားတာပါ။ ၂၀၂၀ အတွက် women’s scholarships တွေကတော့ ရွေးချယ်ပြီးပြီမို့ ၂၀၂၁ ဇွန်လအတွက်လျှောက်လိုသူတွေတော့ ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၃. 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗹𝗮𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 (Exam registration reduced to US $350)
CFA institute နဲ့ affiliate ပြုလုပ်ထားသော ကျောင်းသား/သူများအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော scholarship ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ December စာမေးပွဲအတွက်ကိုလျှောက်ချင်ရင်တော့ 8, August 2020 နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄. 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗹𝗮𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 (Exam registration reduced to US $350)
Finance, economics, business နဲ့ CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK™) မှာပါဝင်တဲ့ topics တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သင်ကြားပေးနေတဲ့ qualified institution နှင့် university များမှ professors တွေ၊ instructors တွေအတွက် scholarship ကတော့ professor scholarship ပါ။ ၂၀၂၀ December စာမေးပွဲအတွက်ကိုလျှောက်ချင်ရင်တော့ 15, August 2020 နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၅. 𝗥𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗹𝗮𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 (Exam registration reduced to US $350)
ဒီ scholarship ကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကို ပေးတာမဟုတ်ဘဲ financial regulators, central banks, securities commissions, qualifying stock exchanges, SROs and/or government entities တွေက ဝန်ထမ်းတွေကို ပေါင်းစုပြီးပေးတာပါ။ သက်ဆိုင်ရာ organizations တွေက မိမိဝန်ထမ်းတွေကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ပြီးပြန်ပေးရမှာပါ။ ၂၀၂၀ December စာမေးပွဲအတွက်ကိုလျှောက်ချင်ရင်တော့ 15, August 2020 နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆. 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗹𝗮𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 (Exam registration reduced to US $350)
Finance field ထဲမှာ တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူမှမဟုတ်ဘဲ financial news, data or education sector တွေမှာ media organization အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ media scholarship ရှိပါတယ်။ full-time or contract ဝန်ထမ်း မည်သူမဆို လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ December စာမေးပွဲအတွက်ကိုလျှောက်ချင်ရင်တော့ 15, August 2020 နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ scholarship များကို လျှောက်ထားလိုသူများအတွက် အသေးစိတ်ကို Matrix Institute of Professionals သို့ ဖုန်းဆက်ပြီးဖြစ်စေ၊ Facebook Messenger မှဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။